Kooxda Celta Vigo oo gaartay afar dhammaadka Copa Del Rey, kaddib markii ay Real Madrid ka reebtay koobka… + SAWIRRO – Gool FM
Kooxda Celta Vigo oo gaartay afar dhammaadka Copa Del Rey, kaddib markii ay Real Madrid ka reebtay koobka… + SAWIRRO
(Vigo) 26 Jan 2017 – Kooxda kubadda cagta Celta Vigo ayaa Real Madrid ka reebtay Copa Del Rey kaddib markii ay barbaro 2-2 wada galeen kooxahan kulankii lugta labaad ee siddeed dhammaadka koobkan.
Real Madrid ayaa kulankan 1-0 lagu hoggaamiyey kaddib markii Danilo Luiz da uu markale iska dhaliyay gool musiibo ku sii abuuray kooxdiisa oo markii horeba la dhibtoonaysay guuldarradii Bernabeu kaga soo gaartay Celta Vigo, wuxuuna Danilo shabaqa kooxdiisa ku leexiyey kubbad uu goolhaye Casilla ka badbaadiyay Guidetti.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta 62’daqiiqo Cristiano Ronaldo ayaa laad xor ah ugu barbareeyey ciyaarta kooxdiisa Real Madrid kulanka ayaana sidaas ku noqday 1-1.
85’daqiiqo kooxda Celta Vigo ayaa heshay goolkeeda labaad ee kulankan, waxaana u dhaliyey Daniel Wass kaddib markii uu dhamaystiray kubbad ay si qurux badan uga soo shaqeeyeen xiddiga Celta, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-1 lagu hoggaamiyey wiilasha Zidane.
Dhammaadkii ciyaarta 90’daqiiqo Real Madrid ayaa iska badbaadisay inay kulankan guuldarro la kulanto, waxaana goolkeeda barbaraha u keenay da’yarka Lucas Vázquez kaasoo si fiican u dhammaystiray caawin uu ka helay Karim Benzema, kulanka ayaana ku soo dhammaaday gar isku mid ah 2-2.
Celta Vigo ayaa sidaas ugu soo baxday afar dhammaadka Copa Del Rey, cel-celis ahaan goolal gaaraya 4-3, halka Real Madrid koobka ay sidaas uga hartay.
Kooxda Southampton oo gaartay final-ka EFL Cup, kaddib markii ay Liverpool ku garaacday garoonka Anfield … + SAWIRRO